Nirefodrefotra ny poa-basy tao Toamasina: lavon’ny Fip i Alphonse, nitsoaka niaraka tamin’ny rojovy | NewsMada
Maty voatifitry polisin’ny Fip tao Toamasina, ny 11 oktobra lasa teo, ny jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana, fantatry ny rehetra amin’ny anarana hoe Alphonse. Nitsoaka niaraka tamin’ny rojovy (menotte) namatorana azy tao amin’ny biraon’ny polisy izy io, ny taona 2019…
Toy ny mijery horonantsarimihetsika! Nahazo loharanom-baovao ny polisin’ny Fip Toamasina, notarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules, fa ao amina trano fandihizana iray ao Bazaribe Toamasina i Alphonse, jiolahy ikoizana sady efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela. Nilaza ilay loharanom-baovao fa misy basy mahery vaika eny aminy. Nandray avy hatrany ny andraikiny ny Fip ka nametraka ny paikady rehetra nahafahana misambotra ity jiolahy ity sady tsy hampikoropaka ny olona rehetra tao amin’ilay trano fandihizana. Nitsoaka avy hatrany i Alphonse raha vao nahatazana ny polisy ka nitsoaka nitsambikina teo amin’ny varavarankelin’ilay trano fandihizana. Tsy vitan’izay fa nanambana basy polisy ihany koa izy. Raikitra ny fifanenjehana teny ivelan’ny trano nihazo ny moron-dranomasina. Namaly tifitra ireo polisy ihany koa izy teny am-pitsoahana. Resy tosiky ny polisy ihany anefa izy ka izao lavon’ny Fip izao. Nahitana basy marika italianina laharana 49 042 Type 7,62 mm tany aminy.
Nitifitra polisy tao Antanamborizano ry Alphonse…
Nohamafisin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules fa nokarohina hatry ny ela ity jiolahy ity taorian’ny fitsoahany tao amin’ny biraon’ny polisy niaraka amin’ny namany antsoina hoe Ravazaha (efa matin’ny polisin’ny Fip) izy. Jiolahy nampihorohoro an’i Toamasina efa an-taona maro ry zalahy ireto. Isan’ireo nitifitra namono ilay polisy avy nanao ny asany ka hamonjy fodiana tao amin’ny fokontany Antanamborozano, ny taona 2018, sy nanafika tokantranona polisy tao Antanandava ireto jiolahy ireto. “Tsy hitsitsy amin’ireo mbola minia hametraka korontana sy tsy filaminan’ny vahoakan’i Toamasina izahay ka mampitandrina ireo olon-dratsy”, hoy hatrany ny kaomandin’ny Fip.